Cycgba ígwè ọ dị mma maka onye nwere ọrịa mamịrị? - Cygba Ígwè
Isi > Cygba Ígwè > Diabetesgba Ọrịa shuga - ịza ajụjụ ndị a
Diabetesgba Ọrịa shuga - ịza ajụjụ ndị a
Cycgba ígwè ọ dị mma maka onye nwere ọrịa mamịrị?
Nnyocha e bipụtara na Medicine na Science in Sports and Exercise gosipụtara nke ahụịgba ígwèna-agafeghị oke ije ije maka otu awa na-enye ndị buru oke ibu ohereọrịa shugaiji belata ọkwa shuga dị n'ọbara ha n'ime awa 24 na-esote. Ọbụnaịgba ígwèngwa ngwa maka naanị ọkara awa nwere ike belata ọkwa maka ụbọchị dum, mana naanị site na 19%.
anyị bụ ndị novo nordisk anyị na ndị na-arịa ọrịa shuga bi na Nava Norris bụ otu egwuregwu egwuregwu egwuregwu zuru ụwa ọnụ nke ndị na-agba ịnyịnya ígwè, ndị egwuregwu atọ na ndị ọgba ọsọ, nke ndị otu egwuregwu bọọlụ ọkachamara nke ụwa nwere naanị ndị ọkachamara na-arịa ọrịa shuga malitere ịgba ịnyịnya agha iji lụso ọrịa shuga m ọgụ na nke ahụ mere m agbụrụ. Egwuregwu m na-agba ịnyịnya ígwè. Amalitere m ịgba egwuregwu mgbe m dị afọ iri na asatọ.
Achọpụtara m na m nwere ọrịa shuga tupu m bụrụ onye na-asọmpi egwuregwu. Anọ m na-asọmpi mgbe niile ma mgbe achọpụtara m na m nwere ọrịa shuga, m kwesịrị ịchọpụta otu esi asọmpi ọzọ. Mgbe m malitere ịme egwuregwu.
Ihe ịma aka ndị m chere ihu bụ na m lebara ọrịa shuga m anya nke ọma nke mere na m bụ ekwekọghị ekwekọ na nke m bụ ihe mere ka m nwee ike ịnagide ọrịa shuga m na igwe kwụ otu ebe - M ga-enwe ọmarịcha ụbọchị na igwe kwụ otu ebe yana ụbọchị ọjọọ na igwe kwụ otu ebe Ọ bụ ihe m mụtara na m ga-enyocha shuga shuga m na-ewere ihe m ga-eri mgbe ọ bụla achọrọ m, ọ bụrụ na shuga shuga m pere mpe, ma ọ bụ ọ bụrụ na m ga-ewere insulin ma ọ bụrụ na shuga shuga m dị ala Ọ Kwesịrị Thezọ m si merie ihe ịma aka ndị a bụ ezigbo iwe na nkụda mmụọ na mbụ, mana Bennett mechara bụrụ ihe kpaliri m n'ihi na amaara m na m nwere ike ijikwa ọrịa shuga m na nke ahụ ekwesịghị ịbụ ihe kpatara na enweghị m ike iru uru achọrọ m mgbe m na-azụ igwe kwụ otu ebe - tupu, oge na mgbe ọzụzụ gasị, enwere m shuga shuga m tupu na mgbe emega ahụ mgbe m na-emega, ana m enyocha ụkpụrụ shuga ọbara m tupu, n'oge na mgbe ajụjụ a bụ mgbe anaghị m anwale ọbara shuga m bara uru m na-elele oge niile maka otu awa nke igwu mmiri m ga-a drinksụ ihe ọ drinksụ drinksụ ole na ole M ga-a drinkụ iko nk na mgbe mmiri, n'ihi na hydration dị oké mkpa nye onye ọ bụla ma m na-a drinkụ ihe ọ drinkụ drinkụ egwuregwu ahụ, n'ihi na ebe ọ bụ na m na-a sugarụ shuga n'oge awa a, ọ na-enyere aka mejupụta m ọbara shuga ma debe ya na ọkwa kachasị mma, mgbe m na-apụ maka ogologo oge, dịka ọmụmaatụ, m na-atụba gel ma ọ bụ abụọ, ọ dị mfe karị iri na njem karịa ka ọ dị na ọdọ mmiri, mana mgbe ahụ, m nwekwara mmiri na ịda mba ọbụlagodi na m na-emega ahụ, achọrọ m iji nri m kpọrọ ihe Ana m eri nri dabere na ole calorie m na-ere ọkụ kwa elekere Kedu obi dị elu nke obi m na-arịgo ugwu m na-eje ije ụzọ dị larịị Onye ọ bụla dị iche na usoro ọzụzụ ọ bụla nwere usoro dị iche iche ihe m ga-eri ụbọchị ahụ n'oge ọzụzụ m ga-ekewa ebe ike dị n'ime ụlọ ma rie otu ọ bụla na 30 nkeji ọ bụla ma m hụkwa na m ga-anọ na mmiri. Maka m, hydration bụ otu n'ime akụkụ kachasị mkpa nke mgbatị m ga-a drinkụ ihe ọ drinkụ drinkụ egwuregwu na na yana na mmiri n'oge m na-agba ọsọ, mana agwakọta gabout ọ bụla 45 nkeji ruo elekere nke na-egosi ma ọ bụ na ogwe ike mgbe ụfọdụ na-agbago, mgbe ụfọdụ ha na-agbada, n’agbanyeghi na ejiri m n’aka na m na-enyocha n’oge, n’oge na mgbe emechara, ka m nwee ezigbo echiche ebe ị nọ n’oge ọzụzụ ọkwa shuga m na-adị elu mgbe ụfọdụ, oge ụfọdụ ha dị ala, mana n'agbanyeghị ihe m na-achịkwa ọtụtụ mgbe m na-azụ ọkwa shuga m na-abawanye ha nwere ike ibelata mana ọ bụ ya mere m ji enyocha ma ana m enyochakarị n'oge ọzụzụ naanị ihe na-emetụta m n'ihe gbasara ihu igwe bụ ma ọ na-ekpo ọkụ n'èzí ma maka m dị nnọọ ga-elekwasị anya na hydration ihu igwe na-emetụta ọrịa shuga m n'oge okpomọkụ Ọ na-esiri m ike karị Ọkụ na akpịrị ịkpọ nkụ gbanwere njikwa ọkwa shuga m n'ezie, m ga-ele ya anya nke ọma na mgbe ụfọdụ achọrọ m obere insulin n'oge mmega ahụ, oge ụfọdụ m bụ enwere obere insulin, mgbe ọ dị ọkụ mgbe ahụ, m ga-anọrịrị hydrated, kwa, na-enweghị njikwa shuga ọhụrụ na-esiri m ike na iri nnu m dịkwa mma iji zere ọnya na ihe ọ bụla nke nwere ike ọ gaghị enwe mmetụta na-adịghị mma mgbe mgbatị ga-amalite usoro mgbake m. ozugbo, ihe mbụ m na-eme bụ ịlele shuga shuga m wee mee mgbanwe dabere na ihe m na-eme m na-ewere insulin m ma ọ bụ oge iri nri iji dozie mgbake ahụ wee weghachite shuga na carbs n'ime ahụ m. N’ime nkeji iri atọ m gwụchara mgbatị ahụ, m nwere ihe dị ka gram 60 ruo 100 nke Carbohydrates gbakọrọ agbata n’agbata na gram iri abụọ na ise na iri anọ. Oge ọbụlagodi mgbe m nwesịrị mgbatị ahụ ogologo oge m bụ usoro mgbake m iji nwee ezigbo ihe ọ andụ andụ na ihe ọ recoveryụ recoveryụ mgbake na mgbe ahụ m ga-etinye oge na-eme nri dị mma nke dị mma ma dị elu na carbohydrates na mgbe ahụ gbatịchara ọrịa ọ bụla dị iche ma ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ Diabetes na dọkịta gị na-arụ ọrụ iji jide n'aka na ị nwere ike ịnụ ụtọ egwuregwu gị n'enweghị nsogbu ọ bụla. anyị na-agba ọsọ, anyị na-agba mmiri ka anyị gbanwee
Cycgba ígwè ọ dị mma maka ụdị ọrịa shuga Typedị nke Abụọ?
Ndị malitere ịnya ịnyịnya aigwe kwụ otu ebena mgbe nile nwere ihe dị pasent 20 dị ala karịapịnye ụdị ọrịa shuga abụọkarịa ndị na-emeghịokirikiri. Nọvemba
Linggba ígwè nwere ike ibelata shuga dị n'ọbara?
Omume ahụ niile bara uru nana-agbada ọkwa shuga dị n’ọbarana nsonaazụ ahụike ha, mana ọrụ ndị na-adịchaghị mma dị ka ịga ije na-adịghị mma ma ọ bụ agafeghị okeịgba ígwè, na ọzụzụ dị arọ kachasị dị irè. Ọ bụrụ na ihe mgbaru ọsọ gị bụbelata shuga dị n'ọbara, imeru ihe n'ókè pụrụ ịbụ ihe na-enye aka karị.
Gba ịnyịnya ígwè bụ ụdị mmega ahụ dị mfe karịa na mmemme ndị ọzọ dị mgbagwoju anya. Gba ígwè na-eme ka ahụ mmadụ rụọ ọrụ nke ọma. O nwere uru nke uche na nke anụ ahụ.
Ihe ọzọ gbakwunyere bụ na ịgba ígwè anaghị achọ ụdị mmanụ ọ bụla yana ọ dị mma na gburugburu ebe obibi. Ọ dịkwa mma maka ọgbọ niile dị ka ọ nwere ike ịdịgasị iche iche na ike. Gba ígwè nwere ọtụtụ uru.
Ka m kọọrọ gị. 1. cgba n’igwe n’eti na-enyere aka mee ka ọgbụgba na-eru ụbụrụ.
Ọbara dị mma na-apụta na nri niile dị mkpa na-eru ụbụrụ anyị aka ma na-enyere ya aka ịrụ ọrụ nke ọma. Otu nnyocha e mere n’afọ 2013 gosiri na ịgba ịnyịnya ígwè mụbara ọbara nke ụbụrụ ndị na-agba ígwè ruo ihe dị ka 28%, Nnyocha ahụ kwukwara na mmụba ọbara na-arịwanye elu mgbe ịnyịnya ígwè gachara na-aga n'ihu mgbe emechara ahụ. Gba ígwè bụ mgbatị mgbatị dị ala.
Pedaling na-enyere aka wulite mọzụlụ na ikpere gị, apata ụkwụ, hips, hamstrings, na ụmụ ehi. 3. Otu mahadum dị na Georgia chọpụtara na onye anaghị arụ ọrụ ọfụma ma dabara adaba nwere ike ibute nsogbu ihi ụra.
Cycgba ígwè kwa ụbọchị na-eme ka ahụ sie ike na ị ga-ehi ụra nke ọma. 4. Cygba increasesgba ígwè na-eme ka obi gị nwee ume ma kwe ka ọbara wụ gị n’ahụ.
Nke a bụ ezigbo ụzọ iji chebe ahụ pụọ n'ọrịa siri ike, gụnyere ọrịa obi. Gba ígwè bara ezigbo uru. Ndị nchọpụta si Mahadum Glasgow mụrụ ihe karịrị mmadụ 2,60,000 maka afọ ise.
Ha nyochara ndị bịara ọrụ igwe kwụ otu ebe na ndị anaghị agba igwe kwụ otu ebe. Ha chọpụtara na ịgba ịnyịnya ígwè na-arụ ọrụ nwere ike belata ọnwụnwa ị nwere ịrịa ọrịa obi na ọkara. Ya mere ịgba ígwè ka mma.
igwe kwụ otu ebe ekwentị
Otu nnyocha nke Mahadum North Carolina chọpụtara na ndị na-agba ịnyịnya ígwè maka nkeji iri atọ ụbọchị ise n'izu na-ewe ihe dị ka ọkara ezumike ezumike ọrịa ma e jiri ya tụnyere ndị ọzọ.
Cycgba ịnyịnya ígwè ọ ka mma karịa ije ije maka ọrịa shuga?
N'ihe banyere mbenata ogo shuga dị n'ọbara, mmega ahụ bara uru na-arụkwa ọrụkarịammega ahụ siri ike: minit 30 ruo 60 nkeịgba ígwèkwa ụbọchị zuru iji iji mgbochi-ọrịa shugauru nke wiil abụọ.
Cycgba ígwè ọ dị njọ nye ndị na-arịa ọrịa mamịrị?
Cycgba ígwè ọ dị mma maka mgbochi insulin?
Mee mgbatị ahụ karịa
Dịka ọmụmaatụ, otu nnyocha chọpụtara na 60 nkeji nkeịgba ígwèon a igwe na a agafeghị oke ijeụkwụ ụbainsulin uchemaka awa 48 n'etiti ndị ọrụ afọ ofufo ahụike (7).Nguzogideọzụzụ na-enye aka ịbawanyeinsulin uche.
Cycgba ígwè ọ na-ebelata abụba afọ?
Ee,ịgba ígwènwere ike inyere akaida abụba abụba, ma ọ ga-ewe oge. Nnyocha e mere n'oge na-adịbeghị anya gosipụtara mgbe nileịgba ígwènwere ike ịkwalite n'ozuzuabụbaọnwụ na-akwalite ahụ ike. Ijibelatan'ozuzuafọgirth, agafeghị oke-ihe omume aerobic, dị kaịgba ígwè(ma ọ bụ n'ime ụlọ ma ọ bụ n'èzí), dị irè iji belataafọ abụba.02.02.2021
Oge ịgba ịnyịnya ígwè 30 ga-ezu?
Cygba ígwèenwekwu ntachi obi na na-apụ naigwe kwụ otu ebe
Mgbatị ahụ naigwe kwụ otu ebeọ dịkarịa alaNkeji 30kaụbọchịga - ewulite obi gị na akwara. Site na itinye mgbalị mgbe niile, ị ga - ahụrịrị mmelite na ikike ikuku gị, na - enyere gị akaigwe kwụ otu ebeogologo oge ma ọ bụ na njem siri ike karị.
Oge ịgba ịnyịnya ígwè dị nkeji iri abụọ ọ dị mma?
.B.okirikiri ụbọchịride nkeNkeji 20ezuola ịnọgbasiri ike. Mgbeịgba ígwèna-enyere aka n'iwepu calorie 1,000 n'otu izu, ọbụnakwaịgba ígwèna a nwayọọ ijeụkwụ nke 12 mph ga-enyere gị ọkụ 563 calories kwa awa, na-ekwu nnyocha. Emegaghị ahụ bụ otu ihe na-ebute ihe egwu na-egbu mmadụ n’ụwa niile.Ọgọst 12 2017
Cycgba ígwè ọ na-ebelata tummy?
Ee,ịgba ígwè nwere ikeEnyemakaida abụba abụba, ma ọgawere oge. Nnyocha e mere n'oge na-adịbeghị anya gosipụtara mgbe nileịgba ígwènwere ike ime ka abụba zuru oke ma kwalite ahụike dị mma. Ijibelatan'ozuzu afọ girth, agafeghị oke-osisi aerobic omume, dị kaịgba ígwè(ma ọ bụ n'ime ụlọ ma ọ bụ n'èzí), dị irè iji belataafọ abụba.02.02.2021
Linggba ígwè ọ na-ebelata abụba abụba?
Cygba ígwèbụ nnukwu mgbatị ịgbakwunye na ahụ ike gị. Ọ bụ mmega ahụ dị oke irènwere ikeenyere gi akabelata abụba afọma gbaruo ebumnuche ọnwụ gị ngwa ngwa.04.06.2018
Nwere ike onye na-arịa ọrịa shuga na-agba ịnyịnya ígwè?
Ee, ịgba ịnyịnya bụ ezigbo nhọrọ mmega ahụ! Ma ọ bụrụ na ị bụ onye ọhụrụ n’ịgba ịnyịnya ígwè, enwere ihe ole na ole ị kwesịrị ịma tupu ị banye na mmiri. Ya mere, m na-ewetara gị ndụmọdụ asaa ndị a maka ịgba ịnyịnya ígwè na-arịa ọrịa shuga, iji nyere gị aka inweta elele zuru oke nke oge egwuregwu a magburu onwe ya!
Gịnị mere ịgba ịnyịnya ígwè ji bụrụ egwuregwu dị mma maka ndị ọrịa mamịrị?
Karịsịa, otu egwuregwu kachasị mma maka ndị na-arịa ọrịa shuga bụ ịgba ịnyịnya ígwè, ebe ọ bụ ọrụ aerobic, nke a na-eme ugboro ugboro. Igwe igwe kwụ otu ebe na - arụ ọrụ megide ọrịa a n'ihi na ọ na - arụ ọrụ 70% nke oke akwara anyị, ka edobere ya na akwara ụkwụ anyị. Ma ọ bụghị naanị nke ahụ.
Ọ nwere ndị na-agba ịnyịnya ígwè nwere ụdị ọrịa shuga nke 1?
Ndị egwuregwu anyị niile na-akpali mmụọ asọmpi na-arịa ọrịa shuga nke ụdị 1. Dị ka ndị mbụ na-agba ịnyịnya ígwè ọkachamara na-arịa ọrịa shuga niile n'ụwa, anyị na-egosi ihe enwere ike ịrịa ọrịa shuga. Ọ bụrụ na ọkpụkpọ amaliteghị n'oge na-adịghị anya, gbalịa ịmalitegharịa ngwaọrụ gị.